Fomba amam-panao breziliana | Vaovao momba ny dia
Maria | | America, Brasil
Brezila, iray amin'ireo firenena lehibe indrindra any Amerika, dia toerana iray anaovan'ny mpizahatany an'arivony maro ny fitsidihana isan-taona hitsidika tanàna malaza toa an'i Rio de Janeiro, ny tontolon'ny natiora toy ny Riandranon'i Iguazú na torapasika mahafinaritra toa ny any amin'ny fanjakan'ny Alagoas .
Azo antoka ny toetr'andro sy ny fangorahan'ny Breziliana. Mandritra ny dia ataonao dia afaka mifangaro amin'ireo tompon-tany ianao raha mbola tsy miditra amin'ireo faritra misy risika lehibe hitranga amin'ny firenena rehetra ianao. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Brezila sy ny fomba amam-panaony ianao dia tandremo izay rehetra ho hitanao etsy ambany.
2 Fandraisana vahiny any Brezila
4 Fombafomba ara-tsosialy
6 Fialamboly Breziliana
7 Akanjo nentim-paharazana
Toy ny any amin'ny firenena amerikanina latina hafa, ny gastronomy breziliana dia vokatry ny fifangaroan'ny nahandro samy hafa toy ny zanatany, eropeana ary afrikanina. Ny elanelan'ny lovia izay hahagaga ny mpitsidika dia malalaka. Ny iray amin'ireo manamarika indrindra dia ny feijoada, vita amin'ny henan-kisoa masira miaraka amin'ny tsaramaso mainty. Mikasika ny zava-pisotro dia malaza be ny caipirinha, cocktail izay nanomboka namboarina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ankafizin'ny kontinanta dimy rehetra izao.
Fandraisana vahiny any Brezila
Manana toetra falifaly, tsy miraharaha ary sariaka ny Breziliana, ka hiezaka hanampy anao hatrany amin'ny fomba rehetra azony atao izy ireo. Izy ireo koa dia fantatra amin'ny fandraisam-bahiny sy ny sainy misokatra. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mankafy andro mahafinaritra be.
Noho ny fitaoman'i Portiogaly dia firenena manana kristiana maro an'isa i Brezila. Tombanana ho 65% ny mponina dia Katolika raha 22% kosa Protestanta. Ny maha-mpivavaka azy dia hita ao amin'ireo tsangambato sy fiangonana marobe miparitaka eraky ny firenena. Raha ny tena izy, rehefa mieritreritra an'i Brezila ianao, ilay Christ of Corcovado malaza, tandindon'i Rio de Janeiro, dia azo antoka fa tonga ao an-tsaina.
Ny fomba fiarahabana any Brezila dia miovaova arakaraka ny toerana misy anao. Ohatra, any Rio de Janeiro dia fanaon'ny olona ny manoroka roa toy ny any Espana, raha ny iray kosa any Sao Paulo dia manome iray eo amin'ny takolaka ankavanana ary raha ny an'i Minas Gerais dia oroka telo no omena!
Mikasika ny fotoam-pisakafoanana dia mazàna manomboka amin'ny valo tolakandro no manomboka misakafo ny olona any Brezila.
Raha resaka raharaham-barotra dia tsy maika ny hanakatona fifanarahana velively ny Breziliana. Maka ny fotoanany izy ireo ary mandroso ny fifampiraharahana mifototra amin'ny fahatokisana. Rehefa manao veloma amin'ny fivoriana voalohany ianao dia ny fifanakalozana karatra fandraharahana voasoratra amin'ny teny portogey no zavatra mahazatra. Amin'ny fivoriana fandraharahana atao any amin'ny firenena, ny fahita indrindra dia ny miteny amin'ny fiteny Portiogey, na dia hatao amin'ny teny Anglisy ihany koa raha toa ka mitaky izany ny tranga.
Tsy misy izay mampifaly ny Breziliana mihoatra ny mozika sy fanatanjahan-tena. I Brezila no firenena manana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra indrindra resy ary tian'izy ireo ny mozika, na amin'ny gadona samba na capoeira, zavakanto afro-breziliana mifangaro akrobatika, dihy ary mozika.
Isaky ny faritra any Brezila dia mahita karazana akanjo nentim-paharazana isika. Ohatra, any Salvador de Bahía, ny vehivavy dia manao baianas, vita amin'ny blouse sy zipo fotsy lava misy dantelina. Matetika izy ireo manao rojo lava sy saron-doha ho firavaka, izay tsy isalasalana fa manondro fa ny Baianas dia mifandray amin'ny kolontsaina Afro-Breziliana.
Ny efatra andro alohan'ny Alarobia Ash, ny fetibe manan-danja indrindra any Brezila, Karnavaly, dia ankalazaina, ka miovaova ny daty eo anelanelan'ny volana febroary sy martsa. Tanàna maro any Brezila no mikarakara ny karnavany manokana fa ny malaza eto an-tany dia ny an'i Rio de Janeiro.
Izany dia atao ao amin'ny Sambadrome, kianja mahazaka mpijery 75.000 ary sehatra lava metatra 500 metatra izay mivory ny sekoly samba mba hanao fampisehoana maharitra adiny iray mahery izay anaovan'ny sekoly tsirairay lohahevitra iray mba hifaninana amin'ny tsirairay hafa. Mba hanatrehana ny Sambadrome dia mila mividy tapakila ianao na miala amin'ny maha mpianatra anao any amin'ny iray amin'ireo sekoly samba.
Fomba fanao amin'ny fampakaram-bady Breziliana tena manaja ny fampakaram-bady ny anaran'ireo sakaizany izay mbola mpitovo ao anaty akanjony. Ary amin'ny fiaraha-misakafo amin'ny fampakaram-bady ny sakaiza antsoina hoe bem-casado dia tompoina foana, izay midika hoe manambady am-pifaliana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Fomba amam-panao Breziliana
Sidina tsy misy toerana haleha mora vidy